एमालेको ब्यालेटमा बादलको परीक्षा, कार्यकर्ताले स्वीकार्लान् ? « रिपोर्टर्स नेपाल
काठमाडौं, १३ मंसिर । नेकपा एमालेमा जानुअघि रामबहादुर थापा बादल नेकपा माओवादीका प्रभावशाली नेता थिए । एमाले र माओवादी एक हुँदा बादल नेकपाको शक्तिशाली सचिवालय सदस्य थिए । तर, उनी पूर्वमाओवादीकै परिचय बोकेर नेकपाभित्र शक्ति सञ्चयमा थिए । नेकपा फुट्दा उनी माओवादीमा लागेनन् एमालेमा लागे ।
एमालेभित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बादललाई महत्वपूर्ण स्थान दिए । बादलले बागमती प्रदेशको इञ्चार्ज जस्तो जिम्मेवारी पाए । उनकै गृहजिल्ला चितवनमा एमालेको १०औं महाधिवेशन आयोजनास्थल तोके । बादललाई ओलीले निकै कसिलो गरी च्यापेको विषय पनि आयो ।
एमालेको पदाधिकारी चयन गर्ने अधिकार महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले ओलीलाई दिए । बादललाई उपाध्यक्षको सूचीमा राखे । तर, घनश्याम भुसाल सूचीमा नअटेपछि उम्मेदवारी दिन पुगेका छन् ।
भुसालको उम्मेदवारीले उपाध्यक्षका लागि चुनाव हुने भएको छ । मैदानमा भुसालसहित अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, रामबहादुर थापा बादल, विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ र सुरेन्द्र पाण्डे छन् । ६ पद भएकाले एकजना स्वतः पराजित हुनेछन् । को प्रतिष्पर्धाबाट आउट हुने हो ? चासोको विषय बनेको छ ।
प्रतिष्पर्धामा विगत देखि नै एमालेमा रहेका ६ जना र बादल पूर्वमाओवादी छन् । अब एमालेभित्र बादलको ब्यालेटमा अग्निपरीक्षा हुँदैछ । उनलाई एमालेका कार्यकर्ताले स्वीकार्लान् ? चासोको विषय बनेको छ ।
एमालेभित्र लामो योगदान गरेका नेताहरुसँग बादललाई चुनाव भिड्न सजिलो छैन । उनी एमाले कार्यकर्तामाझ खासै भिजेका पनि छैनन् । यसकारण स्वीकार्य भइहाल्न कठिन छ । तर, उनलाई ओलीको बलियो साथ भएकाले आशा बढी हुनसक्छ ।
उपाध्यक्षको चुनाव हुँदा ७ जना प्रतिष्पर्धीमध्ये कस्ले कति मत ल्याउने हो चासो बनेको छ । ओलीइतर समूहका ४, ओली समूहका २ र बादल मध्ये कस्ले लोकप्रीय मत ल्याउने हुन् ? यसले पनि एमालेभित्र कार्यकर्ताको सेन्टिमेन्ट र नेताहरुप्रतिको दृष्टिकोण खुल्नेछ ।
अबको निर्वाचनमा कांग्रेसलाई एक नम्बरको पार्टी बनाउँछौं : सुरेन्द्रराज पाण्डे (भिडिओसहित)
काठमाडौं, ६ माघ । नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले पार्टीलाई अब एक ढिक्क बनाएर